ढल्यो आधुनिक कलाको स्तम्भ- कला - कान्तिपुर समाचार
ढल्यो आधुनिक कलाको स्तम्भ
नेपाली ललितकलामा आधुनिक शैली भित्र्याउनेमा अग्रणी उत्तम नेपाली क्यानभासमा मात्रै सीमित भएनन्, अभिनय गरे, कविता पनि कोरे
श्रावण ७, २०७८ सुशीला तामा‌ङ
काठमाडौँ — ललितकलाका आधुनिक प्रयोगवादी कलाकार उत्तम नेपालीको निधन भएको छ । ८५ वर्षीय नेपालीको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बुधबार निधन भएको हो । केही वर्षदेखि मुटुको रोगसँग लडिरहेका उनलाई श्वासप्रश्वासमा पनि समस्या थियो ।
ज्वाइँ सुनील रञ्जितका अनुसार गत महिना बिरामी परेपछि चिरायु, गंगालाल, मनमोहन कार्डियोभास्कुलर सेन्टर हुँदै उनलाई गत मंगलबार मात्र शिक्षण अस्पतालमा सारिएको थियो । पछिल्लो समय उनको स्मरण शक्तिसमेत कम भएको थियो । काठमाडौं किलागलको कर्माचार्य परिवारमा जन्मिएका उत्तम नेपालीले अमूर्त (एबस्ट्र्याक्ट) कलामा निकै ख्याति आर्जेका थिए । अमेरिका आउजाउ गरिरहेका उनी शरीर शिथिल बन्दै गएपछि तीन महिनाअघि मात्र नेपाल फर्केका थिए ।
राणाकालीन समयमा हजुरबुबा कृष्णप्रसाद कर्माचार्य भारतमा निर्वासित जीवन बिताउन बाध्य भएकाले परिवारसँगै नेपालीको बाल्यकाल लखनउमा बितेको थियो । उनले उतै विद्यालय र कला शिक्षा हासिल गरेका थिए । परिवार व्यवसायमा संलग्न भए पनि बाल्यकालदेखि उनलाई कलामा रुचि थियो । सन् १९५९ मा लखनउको कलेज अफ आर्ट एन्ड क्राफ्टबाट कलामा स्नातक गरेका उनले नेपालमा आधुनिक चित्रकलाको शैलीलाई विधागत र प्रयोगात्मक रूपमा नै नौलो आयामतिर ढल्काएको कला समीक्षक मुकेश मल्लले बताए । नेपालीको सक्रियतासँगै चित्रकलाको प्रदर्शनी, प्रचार, बुझाइ र सिर्जनामा व्यापक परिवर्तन सहज भएको थियो ।
‘आधुनिक चित्रकलामा उत्तम नेपाली एक स्तम्भ बिन्दु मान्नुपर्छ,’ मल्लले भने, ‘उहाँभन्दा पहिला कलाकारहरू लैनसिंह वाङ्देल, उर्मिला उपाध्याय लगायतले आधुनिक चित्रकलाको आयामलाई अगाडि बढाएको भए पनि विशेषगरी सन् १९६२ मा भएको उत्तम नेपालीको पहिलो चित्रकला प्रदर्शनीपछि कलाकारहरूमा कला प्रदर्शनीको लहर चलेको थियो ।’ त्यसबेला प्रदर्शनीको उद्घाटन तत्कालीन राजा महेन्द्रले गरेका थिए ।
नेपालीले हुलाक सेवा र सूचना विभागमा गरी झन्डै दुई दशक काम गरे । टिकट डिजाइनरका रूपमा उनले काम गरेका थिए । नेपालीको कला यात्रालाई ‘उत्तम नेपाली : नेपाली आधुनिक कलाको बलियो स्तम्भ’ पुस्तकमा उतारेका मल्ल भन्छन्, ‘उहाँ हुलाक सेवा विभागमा आएपछि नेपालको रंगीन टिकट छापिन थालेको थियो । पहिलो टिकट थियो राजा महेन्द्र घोडा चढेको दृश्य भएको, त्यसको डिजाइन उहाँले गर्नुभएको थियो ।’ कलाकारका रूपमा हुलाकमा नेपालीको प्रवेशअघि सरकारले कलाकार नै भर्ना गरेर टिकट डिजाइन गर्न लगाई छपाउने चलन थिएन ।
नेपालीले सुरुवाती चरणमा यथार्थवादी विषयमा चित्रहरू बनाएका थिए । केही पछिदेखि भने उनका अधिकांश सिर्जनामा नौलो प्रयोग हुँदै गएको देख्न सकिने समीक्षक रमेश खनालले बताए । ‘हामीले अमूर्त कला सिर्जना र यसको मूल्यका बारेमा उहाँबाट सिको गरेका छौं । उहाँलाई नेपाली अमूर्त सिर्जनामा प्रवर्तकका रूपमा लिन सकिन्छ,’ उनी भन्छन् ।
वि.सं. २०२६ मा भएको ‘इरोटिक सिरिज’ प्रदर्शनीमा उनले टुँडालका कलाबाट उत्प्रेरित भएर कामोत्तेजना र धर्मलाई सम्मिश्रण गरेर आधुनिक झल्को दिए । तिनताक रङकै माध्यममा उनले परम्परा, मानवीय संवेदना र कलाको पाटोलाई नियाल्ने जमर्को गरे ।
नेपाली कवि तथा अभिनेता पनि थिए । नेपालको पहिलो चलचित्र ‘आमा’ र ‘हिजो आज भोलि’ मा उनले अभिनय पनि गरेका छन् । उनको ‘उत्तम नेपालीका कविताहरू’ नामक संग्रह पनि प्रकाशित छ । २०३२ सालमा उनले गरेको एकल चित्रकला प्रदर्शनीमा २८ जना कविहरूका कवितामा ३२ वटा चित्रहरू तयार गरेका थिए । २०५५ मा ‘कला र साहित्य’ शीर्षकमा गरिएको प्रदर्शनीमा केदारमान व्यथित, तारानाथ शर्मा, वासुदेव त्रिपाठीलगायत २१ जना साहित्यकारको व्यक्तिचित्र र महत्त्वपूर्ण कृतिलाई अक्षरमा देखाएका थिए । आधुनिक कलाको विकासमा उत्तम नेपालीको बलियो पक्ष देखिएको प्राध्यापक अभि सुवेदी बताउँछन् । ‘कलामा अमूर्त प्रयोग त छँदै थियो त्यसमा उहाँले साहित्यलाई नजिक ल्याएर झन् आधुनिकता थप्नुभयो,’ उनले भने, ‘उहाँ कलालाई कविताको नजिक ल्याउन खोज्नुहुन्थ्यो । कलाको बिम्ब, रङ, आकारलाई कन्सेप्टमा लगेर छोड्नुभयो ।’
नेपालीले एक दर्जनभन्दा बढी एकल प्रदर्शनी गरे भने सामूहिक प्रदर्शनीमा पनि धेरै पटक सहभागी भए । भारत, जापान, दक्षिण कोरियालगायतमा समेत प्रदर्शनी गरेका थिए । ‘उहाँ आफ्ना सिर्जनामा मात्रै सीमित हुनुभएन, नेपालमा ललितकला संस्थाको गठनदेखि स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको हो,’ नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति केके कर्माचार्यले भन्छन् । थुप्रै सम्मान र पुरस्कार पाएका नेपालीलाई सम्झँदा ललितकलाको विधामा काम गरिरहेकाहरू श्रद्धापूर्वक नाम लिन्छन् । नेपालीका श्रीमती, दुई छोरा र दुई छोरी छन् । उनको बुधबार नै पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार गरिएको छ ।
प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ ०७:१९
श्रावण ७, २०७८ सम्पादकीय
इजरायलको एक कम्पनीले बनाएको मोबाइल फोन जासुसी गर्ने सफ्टवेयर पेगाससको एकदमै दुष्ट प्रयोजनका निम्ति भइरहेको प्रयोगका कारण यतिखेर सम्पूर्ण विश्व आतंकित छ । यो सफ्टवेयरले प्रयोगकर्तालाई थाहै नहुने गरी निजको फोनमार्फत सम्पूर्ण सूचना तथा गतिविधि संकलन गर्ने बताइएको छ ।
फोन जासुसी गर्ने सफ्टवेयर पेगासस विकास गर्ने कम्पनी एनएसओको इजरायलको हर्जलियास्थित मुख्यालय । तस्बिर : टाइम्स अफ इजरायल
निसानामा राखिएका व्यक्तिको फोनमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गराइने ‘स्पाइवेयर’ ले मोबाइलका फाइलसहित माइक र क्यामरामा समेत पहुँच राख्ने जनाइएको छ । नागरिकका हात–हातमा स्मार्टफोन भएको यो युगमा प्रविधिको यसरी चरम दुरुपयोग हुनु मात्रै पनि जगत् त्रस्त हुन पर्याप्त छ । तर कुरा यतिमै सीमित हुँदैन । विश्वका कतिपय सरकारहरू नै लोकतन्त्रद्रोही यो सफ्टवेयरको ग्राहक बनेको खुलासा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले गरेका छन्, जसलाई पेगासस विकसित गर्ने कम्पनी एनएसओले पनि पुष्टि गरेको छ ।
विभिन्न देशका १७ सञ्चार माध्यमले यो मामिलामा यसअघि ‘लिक’ भएका ५० हजार फोन नम्बर अध्ययन गर्दा चार दर्जनभन्दा बढी देशका हजारभन्दा बढी व्यक्तिमाथि निगरानी भइरहेको पहिचान गरेका छन् । यसमा हामीले प्रत्यक्ष चिन्ता गर्नुपर्ने कारण पनि छ— भारतका लागि नेपाली राजदूतको नाम पनि यो सूचीमा छ । भारतका राजनीतिकर्मी, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, कूटनीतिज्ञ, पत्रकार, अधिकारकर्मीलगायत चीन, पाकिस्तान, साउदी अरब, इरान र नेपालका नयाँदिल्लीस्थित राजदूतको पनि यो सफट्वेयरमार्फत जासुसी भइरहेको जनाइएको छ । यसबारे नेपाल सरकारले चासो देखाउन जरुरी छ । अनधिकृत तवरबाट विदेशी कूटनीतिज्ञको फोन यसरी जासुसी गर्नु गम्भीर अपराध हो । त्यसैले छिमेकी मुलुकस्थित आफ्नो दूतको मोबाइल फोनको निगरानी कसले, किन र कुन प्रयोजनका निम्ति गरिरहेको छ भन्ने जानकारी राख्नुपर्छ । र, संवेदनशील अधिकारीहरू साइबर–सुरक्षाप्रति सचेत रहनुपर्छ, सरकारले नै यसमा संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ ।
सर्वव्यापी भयको विषय भएकाले सम्पूर्ण विश्वले नै यो मामिलालाई चिन्ताका रूपमा लिएको छ, लिनुपर्छ पनि । लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार पक्षधर शक्तिराष्ट्रहरूले यसको छानबिन गर्नका निम्ति दबाब दिनुपर्छ । यो प्रकरण किन अति डरलाग्दो देखिन्छ भने, एनएसओले पेगासस सरकारलाई मात्रै बेच्ने गरेको र अहिलेसम्म ३६ देशका सरकार तथा सुरक्षा एजेन्सी आफ्ना ग्राहक रहेको जानकारी दिएको छ । भारत सरकारले यसमा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गरे पनि भारतीयहरूको फोन नम्बर पेगाससको ‘डेटा सेन्टर’ मा कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ । एनएसओ कम्पनीले आफूले आतंकवादी गतिविधिको सूचना संकलन गर्ने उद्देश्यले पेगासस बनाएको र बेच्ने गरेको दाबी गरे पनि भारतमा सतहमा आएका नामहरू हेर्दा यसको प्रयोग नागरिक र कूटनीतिज्ञमाथि निगरानी गर्न भइरहेको देखिन्छ ।
यसै पनि पछिल्ला वर्षहरूमा कतिपय मुलुकमा चुनावबाटै कट्टरपन्थी शासक उदाउन थालेसँगै लोकतन्त्रको भविष्यलाई लिएर सर्वव्यापी चिन्ता छ । लोकतन्त्रमा अहरणीय मानिने नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकार त्यस्ता शासकबाट प्रत्यक्ष–परोक्ष खोसिने क्रम जारी छ । यही बेला फेरि नागरिकलाई निगरानी र नियन्त्रणमा राख्न चाहने तिनै शासकहरूको मनोकांक्षालाई सघाउने गरी यस्तो सफ्टवेयरको विकास हुनु र तिनलाई सरकारहरूले प्रयोगमा ल्याएको पाइनु चिन्ताजनक छ । भारतीय नागरिक र कूटनीतिज्ञहरूका हकमा यदि यस्तो कुचेष्टा भारत सरकारले नै गरेको हो भने विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र दाबी गर्ने मुलुकका लागि यो निकै ठूलो लज्जाको विषय हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचरी मामिलासम्बन्धी चिन्ता गर्दागर्दै हामीले के पनि भुल्नु हुँदैन भने हाम्रै देशमा आन्तरिक रूपमा पनि यो खतरा उत्तिकै छ । गुप्तचर विभागले नागरिकका फोन ट्याप गर्न सक्ने विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभा पुगेकाले नागरिकको गोपनीयता यहाँ पनि जोखिममा छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई समेत आफूमातहत लगेर शक्ति एकीकरण गर्दै नागरिकको ‘फोन ट्यापिङ’ गर्ने गरी कानुन प्रस्ताव गरेका थिए ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले फोन ‘इन्टरसेप्ट’ गर्न सक्ने गरी सरकारले कानुन मस्यौदा गरेको छ । विरोधका बावजुद पनि राष्ट्रिय सभाबाट २०७७ असारमा पारित विशेष सेवासम्बन्धी विधेयकमा ‘इन्टरसेप्सन’ को प्रावधान राखिएको छ । संसद्मा विचाराधीन सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा पनि यस्तै प्रावधान राखेको ओली सरकारले नागरिकको फोन ‘ट्यापिङ’ गर्न र विवरण माग्न सक्ने अधिकार सरकारी अनुसन्धान अधिकृतलाई सोझै दिने गरी दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा बनाएको थियो ।
आतंकवाद तथा समाजमा हुने अरू आपराधिक घटना न्यूनीकरणका निम्ति अनुसन्धानको पाटोलाई बलियो बनाउने प्रबन्ध मिलाउनु अवश्य पनि जुनसुकै सरकारको दायित्व हो । तर त्यसकै लागि सरकारले नागरिकको संवैधानिक अधिकार क्षेत्रभित्र घुसेर अतिक्रमण गर्न पाउँदैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पूर्वसहमतिमा मात्रै यस्तो व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरकारी अधिकारीको तजबिजीमा गरिने कतिपय कारबाही औचित्यका आधारमा भन्दा पनि सत्ता तथा शक्तिको प्रभावमा हुने खतरा अधिक रहन्छ ।
यहाँ तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या अनुसन्धानमा अनावश्यक व्यक्तिको फोन र एसएमएस लिएर त्यसको दुरुपयोग भएपछि सर्वोच्च अदालतले ‘कानुनमा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था’ मिलाउन परमादेश दिएको तथ्य स्मरणीय छ । कथं अदालतको आदेशबिना पनि सरकारले जोकोहीको फोनमा पहुँच राख्न थाल्यो भने त्यसले नागरिकको गोपनीयता मात्रै खुम्च्याउँदैन, सर्वत्र सरकारी भयको सञ्चार पनि गर्छ । त्यसबाट नागरिकहरूमा ‘सेल्फ सेन्सर’ हाबी भई लोकतन्त्र संकुचित बन्न पुग्छ । तसर्थ, विदेश–स्वदेश सर्वत्र भैरहेको नागरिकलाई अनधिकृत निगरानी गर्ने प्रयत्नको जोकोहीले डटेर विरोध गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ ०७:१३
बिनायो प्रतियोगितामा राई प्रथम
‘तिमी मेटाउँदै जाऊ, म बनाउँदै जान्छु’
सिआनका पत्थरमा नेपाली झल्को
महामारीबाट ललितकला क्षेत्रले के सिक्ने ?
बिनायोले मन मेरो रमायो...